Waa maxay xeerarka qaabka PCB ee gobolka ah? - Shiinaha Fastpcba Technology
Taageerada email pcba19@pcb-smt.net
Taageerada Call 0755-26978877
Waa maxay xeerarka qaabka PCB ee gobolka ah?
PCB taararka guddiga waa mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah oo aan ordi karaan. Taararka PCB waxay ku salaysan tahay schematics korontada iyo miiska silig iyo width ee silig loo baahan yahay iyo qaabka kala dheereynta daabacay silig, taararka waa in guud ahaan raacdo xeerasha soo socda:
1. On u weeyn oo qanciya shuruudaha isticmaalka, si xulashada habka taararka waa lakabka hal → lakabka ugu horeysay multilayer →, la, taararka la fududeeyey karo.
2. signal The on lakabka la mid ah guddiga PCB u beddelayo jihada la sagxada ama kala guurka ah siman, iyo gacan ah ee dhaf waa wax yar ka wanaagsan, in ay ka fogaadaan fiirsashada beerta korontada, milicsiga signal iyo impedance dheeraad ah.
3. Qaabka The fiilooyinka u dhexeeya labada pads xidhiidh waa sida gaaban ee suurtogalka ah, iyo signallo xasaasi ah iyo calaamadaha yaryar marka hore u tagtaa. Si loo yareeyo ah dib u dhac iyo faragelin ah calaamadaha yaryar. gaashaan line grounding waa in la soo aadan dhigay inay line aqbasho Bannaanka analog ah; khariidad ee kaari la mid ah lakabka waa in si siman loo qaybiyey. Meesha tabinta on silig kasta waa in la yara dheeli tiran si looga hortago warpage guddiga.
4. wareeggeedii Digital iyo wareeggeedii analog waa in la kala soocay in fiilooyinka ah si aanay u dhexgalin midba midka kale.
5. Marka qaybaha circuit on board Pcba ah waxaa aad gun iyo xidid xiran korontada ah, raadad waa in ay ahaataa sida gaaban ee suurtogalka ah iyo sida ugu dhow ee suurto gal ah si loo yareeyo iska caabin ah gudaha ee guddiga PCB ah.
6. dhererka oo ka mid ah khadadka I / O of wareeggeedii-xawaaraha sare, sida khadadka kala duwan I / O iyo xoojiyayaasha kala duwan iyo xoojiyayaasha isku dheeli tiran, waa in loo siman yahay. Si looga fogaado dib u dhac aan loo baahnayn ama wareeg wajiga.
7. raad The on lakabka kasta oo ka mid ah guddiga multilayer waa in ay ahaataa dadab iyo in ay midba midka kale si loo yareeyo xigay. Iska ilaali in lays iyo dheelitirka ee lakabyada sare iyo hoose.
8. Marka suufka xiran yahay aagga tabinta goobta waaweyn iyo kuwo yaryar, waa in la dahaaran leh silig khafiif ah la dherer ah oo aan ka yarayn 0.5mm. width of silig khafiif ah waa in aanay noqon wax ka yar 0.13mm.
9. silig The dhow cidhifka guddiga circuit ku daabacan waa ka weyn yahay 5mm ka cidhifka guddiga circuit ku daabacan. silig dhulka waxay noqon kartaa meel u dhow cidhifka guddiga marka loo baahdo. Haddii tareenka Hanuuniye waa in la geliyo inta lagu guda jiro howsha guddiga circuit ku daabacan, masaafada u dhaxaysa silig iyo guddiga waa in uu noqdaa ugu yaraan ka sii weyn tahay si qoto dheer ee tareenka hagaha.
FASTPCBA Technology Co., Ltd waa soo saaraha ah PCB xirfadeed ee Shiinaha, Shenzhen. Iyadoo 14 sano ee horumarinta, FASPCBA beddelin saaraha ugu horeysay fasalka ee PCB HDI, ee leh awood wax soo saarka 35,000 square meters.If aad rabto in aad wax dheeraad ah PCB , fadlan la xiriir: pcba06@pcb-smt.net
waqti Post: Aug-27-2018